Netizen Report: Fanafihana ratsy nanapaka ny Wikipedia tamin’ny aterineto · Global Voices teny Malagasy
Vaovaon'ny teknolojia sy ny zon'olombelona manerana izao tontolo izao.
Voadika ny 02 Oktobra 2019 5:46 GMT
Na dia efa nikatona hatry ny ela tany Torkia sy Shina aza ny Wikipedia, ary nakatona vetivety tany amin'ireo firenena hafa, toa an'i Venezoela, noraisin'ireo manampahefam-panjakana ireny fepetra ireny tamin'ny fanamarinana araka ny lalàna [ao amin-dry zareo].
Nanamarika ny HackRead, bilaogy momba ny fiarovana antserasera fa lasa mahazatra tao anatin'ny taona vitsy lasa ny fanafihana atao amin'ny alalan'ny fitaovana IoT.
Tsara ny manamarika fa tato ho ato, nampiasa fitaovana marani-tsaina marefo sy tsy tena izy ireo mpijirika, fitaovana toy ny milina fivarotana, fakantsary fanarahamaso), milina fakàna kafé, Fahitalavitra Raitra (Smart TV), ary koa ireo fiara misy aterineto mihitsy aza mba hanaovana fanafihana DDoS sy rindrampisolokiana.
Tao amin'ny bilaogy ofisialy momba io tranga io, Wikimedia Foundation nanoratra hoe:
Tamin'ny 12 septambra, nitatitra ny media Kiobàna fa naato tsy nisy fampilazana ny kaonty Twitter an'ny filoha teo aloha Raul Castro sy ireo fampahalalam-baovao tantanin'ny fanjakana Kiobàna marobe. Raha namaly ny fanontanian'ny Reuters, nilaza ny tompon'andraikitra ofisialy ao amin'ny Twitter fa “mandràra ny mpampiasa tsy hanamafy na hanakorontana resaka amin'ny fomba ivelany amin'ny fampiasana kaonty marobe ny politikan'ny fampiasana ny sehatry ny orinasa (Twitter).” Naverina ny sasany tamin'ireo kaonty ny hariva, ka anisan'izany ny kaonty ofisialin'ny Granma, gazety mpivoaka isan'andro sady sampana ofisialin'ny Antoko Komonista Kiobà. Mbola tsy mandeha kosa ny kaonty ofisialin'i Raul Castro tamin'ny fotoana nanoratana ny lahatsoratra.
Na dia tsy fahita firy amin'ny kaontin'ny fampahalalam-baovaom-panjakana aza ny mamerina ny hafatra avy amin'ireo manampahefanan'ny antoko, izay mety ho fanitsakitsahana ny politikan'ny Twitter sy hiteraka fampiatoana, dia mitana andraikitra tokana amin'ny tombontsoam-bahoaka kosa ireo kaonty ireo amin'ny maha loharanom-baovao ofisialy azy. Ary raha vao nosakanana, dia nitarika tany amin'ny ny pejy “kaonty miato”, ka tsy ahitana fandraketana izay navoakan'ny kaonty tany taloha.
Tamin'ny resadresaka tamin'ny Twitter momba ny tranga, nanoratra ilay mpanao gazety Kiobanina sady mpanoratra ato amin'ny Global Voices, Elaine Diaz hoe:
Mety tsy maintsy mandoa onitra noho ny famerenany ny hafatra iray ilay mpanao gazety Yasumi Iwakami, hafatra milaza fa nasaina namono tena ny mpiasa iray tao amin'ny governoram-panjakana teo aloha. Na dia efa nofafan'i Iwakami aza taty aoriana ilay hafatra nozaraina, dia mbola nitory an'ilay mpanao gazety noho ny fanalam-baraka ny governoran'i Osaka teo aloha Toru Hashimoto, nitaky 1,1 tapitrisa yen (manodidina ny 10.000 dolara Amerikana) noho ny fahavoazana. Namoaka didy ny fitsarana tao Osaka tamin'ny 12 Septambra fa mila mandoa ny ampahatelon'ny vola ihany i Iwakami, noho ny ambahindainy – manana mpanjohy 180k ao amin'ny Twitter i Iwakami- sy ny zava-misy fa tsy voaporofo ny fanambarana tany am-boalohany.
Notorian'ny praiminisitra any Singapaoro Lee Hsien Loong i Terry Xu, lehiben'ny tonian-dahatsoratry ny tranonkalam-baovao tsy miankina The Online Citizen, noho ny fanalam-baraka tamin'ny lahatsoratra iray izay nanakianan'i Xu ilay mpitarika ny vahoaka (PM) manana disadisa amin'ireo mpiray tampo aminy. Heloka izay ahazoana sazy henjana mandritra ny roa taona an-tranomaizina sy onitra ny fanalam-baraka any Singapaoro.
Nilaza ireo mpitsikera fa ohatra iray hafa amin'ny fandraisana henjana ataon'ny governemanta amin'ny haino aman-jery tsy miankina sy ny vondrona hafa izay mitatitra fomba fijery tsy mitovy amin'ny manampahefana ao amin'ny firenena izany- na dia efa nampangain'ny fitondrana ankehitriny ho nanala baraka azy aza i Xu teo aloha.
Nanohitra ny fanapahan-kevitry ny praiminisitra mba hikendry olona izay mamerina ireo fanambarana nataon'ireo mpiray tampo aminy i Kirsten Han, mpanao gazety sady mpikatroka:
Namerina tamin'ny laoniny ny fidirana amin'ny aterineto tany amin'ny faritany Papoà Andrefana sy Papoà ihany ny fanjakana Indoneziana tamin'ny 5 septambra, namarana ny fanakatonana izay nanomboka tamin'ny 21 aogositra taorian'ny fitomboan'ny fihetsiketsehana manohitra ny fihoaram-pefy ataon'ny miaramila.
Nitranga ny fihetsiketsehana sy ny fanakatonana taorian'ny fifandonanana izay niantsoin'ireo manamboninahitra ao amin'ny tafika hoe “rajako” ireo mpianatra Papoaziana – fomba fiantso manavakava-bolonkoditra izay matetika iantsoana ireo Papoaziana manana hoditra mainty kokoa noho ny Indoneziana Aostroneziana. Tamin'ny 17 aogositra, dia mpianatra 42 eo ho eo no notanan'ny polisy nandritra ny alina iray. Nitohy tany amin'ny faritany sy ireo tanàna hafa Indoneziana ny fihetsiketsehana sy ny fikomiana ho setrin'ny fitazonana sy ny fampiasan'ny miaramila fanevatevana manavakava-bolonkoditra.
Nilaza ireo tompon'andraikitra ao amin'ny governemanta fa natao ny fanakatonana ny aterineto mba hanakanana ny firongatry ny vaovao sandoka sy ny tsaho mandritra ny fihetsiketsehana. Tamin'ny fanambarana an-gazety, nampitandrina ny minisitry ny fiarovana ambony fa “raha miharatsy ny toe-draharaha [filaminana], izay antenainay fa tsy hitranga, dia hotapahanay indray ny aterineto.”
Oiwan Lam, Mong Palatino, Juke Carolina Rumuat, Taisa Sganzerla sy Nevin Thompson no niara-nanoratra ity tatitra ity.